Soomaaliya oo ka qeybgeleysa Olombikada dhalinyarada Africa (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaborone – Mareeg.com: Waxaa ka furmey magaalada Gaborone ee dalka Botuswana, tartanka 2-aad ee ciyaaraha Olombikada dhalinyarada qaaradda Africa 2014 (Africa Youth Games) iyadoo ilaa dhamaadka bishan Maajo uu soco doono tartanka oo lagu tartami doono ilaa 21 ciyaarood oo kala duwan.
Tartanka 2aad ee ciyaaraha Olombikada dhalinyarada qaaradda Africa ayaa waxaa ka qeybgalaya ilaa 2,500 oo ruux oo 1000, kamida ay yihiin Maamul iyo Macalimiin, waxaana ay ka kala socdaan 54 dal ee qaaradda Africa, iyadoo lagu tartami doono 21 nooc oo tartamo ah oo ay kujirto Ciyaaraha Fudud, K/koleyga, Feerka, Kubaddacagta, Karatega, Legdanka, baaskiilada, Dabaasha, tenniska, K/laliska, Culeys qaadka, Golfka, Rugbiga iyo qaar kale oo badan.
Dalka Soomaaliya ayaa kamida dalalka ka qeybgalaya tartankaasi, inkastoo qeybta Ciyaaraha fudud ee Orodka ay tabartu noo ogolaatay inaanu uga qeybgalno,waxaana iminka Gaborone ku sugan wafdi Ciyaartoy,Tababare iyo Maamul isugu jira oo uu hogaaminayo xoghayaha GOS Duraan Faarax, iyadoo labada ciyaartoy ee Axmed Xuseen Xassan iyo Maryan Nuux Muuse ay ku tartami doonaan Orodada 800M iyo 1500Mitir.
Markii ay wafdigu gaareen Gaborone ayaa waxaa si weyn usoo dhoweeyey gudigii qaban qaabada iyo madaxda Sportiga ee dalka Botuswana, iyadoo xafladii furitaankana halkaasi laga saarey calanka quruxda badan ee Buluuga dhexda xidigtu kaga taal, loona garaacay astaanta calanka Soomaaliya.
Inkasta oo guushu iyo guul daradu xag rabi ka qoran tahay, dadaalna uu yahay lama huraan,welibana 2 ciyaartoy keliya halkaasi ka qeybgalayaan, halka dalalka qaar 30 ciyaartoy ay geesteen tartanka, ayaa hadana Gudiga Olombikada dalka waxay had iyo goor ku dadaalaan in Soomaaliya aysan ka maqnaan fagaarayaasha iyo shirarka caalamka oo looga hadlayo ama lagu qabanayo tartamada caalamiga ah, taasi oo ay amaan weyn ku muteysteen, waxaase haboon in lagu dhiiri geliyo oo gacan weeyn laga siiyo sidii ay horey ugu sii talaabsan lahaayeen, taasi oo laga doonayo min dowlad, ganacsato iyo shaqsi kasta oo Soomaaliyeed.
Abaanduulaha milateriga Soomaaliya oo reer Doolow kala hadlaya isku xirka ciidamada